सिभिल बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ५५ करोड ६९ लाख, अन्य वित्तीय अवस्था कस्तो ? – Insurance Khabar
सिभिल बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ५५ करोड ६९ लाख, अन्य वित्तीय अवस्था कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आईतवार १०:०२
सिभिल बैंकले गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ कमो चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा ७६ करोड ४ लाख मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको नाफा १७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६२ करोड ९८ लाख मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने ५५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा बैंकले ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब २५ करोडले बढी हो । त्यस्तै बैंकले ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ८ अर्ब २२ करोडले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २१०७५ /७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १४ करोड ४८ लाखले बढेर ६२ करोड ८५ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ४८ करोड ३७ लाख थियो ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा १ अर्ब ६१ करोड छ । खराब कर्जा २.६५ प्रतिशतले घटाएर २.३७ प्रतिशतमा झारेको बैंककोे मूल्य आम्दानी अनुपात १६.६३ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ एक सय २७ रुपैयाँ ९८ पैसा, प्रति शेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ ।